Momba anay - Hemgrinder
Hemgrinder dia marika Shenzhen Gesheng Technology Co., Ltd.
Hemgrinder dia nanolo-tena amin'ny asa tsotra: manome ny vidiny ambany indrindra, ny kalitao avo indrindra, ary koa ny endri-javatra mandroso ary ny famolavolana tena tsara!
Misy milina fanamboarana tsindrona 20, milina fanodinana maty, fanodinana mavesatra, tadidim-piraisana CNC, miaraka amin'ny famoahana 20 tapitrisa isan-taona. Ny vokatra manomboka amin'ny famokarana mankany amin'ny fanaterana dia hodinihina, ny vidiny sy ny kalitao dia manana tombony tanteraka! Amidy manerana an'izao tontolo izao ny vokarintsika ary mahazo laza tsara. Ny fahamarinan'i Hembrinder, ny heriny ary ny kalitaon'ny vokatra dia neken'ny orinasa. Manantena izahay fa hahazo mpizara bebe kokoa amin'ny firenena samihafa.
Anjarantsika ny hampihenana ny vidiny, fanatsarana ny fifaninanana eo amin'ny tsena ary hahazoana tombontsoa iraisana ary valin'ny fandresena. Ny kalitao voalohany, ny mpanjifa aloha, ny fifantohana amin'ny tsy fivarotana, ny fampandrosoana ary ny fanavaozana. Tongasoa eto ny fitarihana sy ny fifanakalozana ny mpiara-miasa amin'ny indostria!
Hatramin'ny nananganana azy, ny marika dia mifikitra amin'ny telo kalitao "tsara, fahatokisan'ny mpanjifa, tolotra tsara". Mba ahafahana manatanteraka ny fangatahan'ny tsena ary hiaro ny tombontsoan'ireo mpanjifa
Filozofia ara-barotra: tsy fivadihana, fahamboniana, fandresena!
Foto-kevitra momba ny serivisy: ny mpampiasa rehetra no fotony!
Raha mibanjina ny lasa, feno hafanam-po isika, manantena ny ho avy, dia matoky bebe kokoa isika! Ny Hemgrinder dia mandray hatrany amin'ny sehatry ny orinasa "manaraka ny kalitao tonga lafatra ary mamorona lamaody mahazatra", miaraka amin'ny toe-tsaina am-pahatsorana, ny serivisy serivisy tsara ary ny fanavaozana tsy manam-petra.
Tongasoa mpanjifa ho avy hiresaka, hanadihady sy hitarika!